Galmudug oo dardargelineysa dhismaha goleyaasha degaanka
By GO + Madaxtooyada Galmudug
Madaxweyne Qoor-qoor ayaa faray Wasaaradda Arrimaha Gudaha in ay qabato shaqadaas.
DHUUSAMAREEB, Galmudug - Madaxweynaha Dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ayaa soo dhaweeyay doorashada Guddoonka Degmada Gaalkacyo.
Madaxweynaha ayaa ku ammaanay wasaaradda Arrimaha Gudaha, federaalka iyo Dib uheshiisiinta oo suura gelisay dhismaha golaha deegaanka iyo doorashada guddoonka Galkacyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa wuxuu ku dhiirogeliyay wasaaradda in ay dardar-geliso dhismaha golayaasha deegaanka dhamaan degmooyinka kale ee Galmudug ee dhiman.
GO + Madaxtooyada Galmudug
Ciidamo hubaysan ayaa la sheegay inay la wareegeen Hoyga Madaxaweyne Xaaf ee...
Dowladda Soomaaliya oo soo faragelisay Khilaafka Galmudug [Dhageyso]
Soomaliya 27.05.2018. 00:30
Khasaaraha ismiidaamintii huteelka Gaalkacyo oo la shaaciyey
Soomaliya 21.12.2019. 23:32
Odayaasha soo xulaya baarlamaanka Galmudug oo la magacaabay
Soomaliya 30.11.2019. 11:34
Guddi loo magacaabay maamul dhisida dowlad goboleedka Galmudug
Soomaliya 09.10.2019. 09:33
Wasiir isu casilay "farogelinta" xukuumadda federaalka ee Galmudug
Soomaliya 20.09.2019. 20:21
GALMUDUG: ​Ciidamo laga saarey Cadaado [Sawirro]
Soomaliya 30.09.2017. 15:21